Acer Active AEON Campaign - Shwe Lamin Nagar Group of Companies
Shwe Lamin Nagar Group of Companies > Promotion > Acer Active AEON Campaign
Acer Active AEON Campaign
ဒါမှမဟုတ် ချက်ချင်းလက်ငင်း ငွေချေပြီးဝယ်ဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူး.
အဲ့လို အခက်အခဲနဲ့ကြုံနေရသူတွေအပြင် ငွေကိုတစ်ခါထဲ လုံးကနဲ မသုံးချင်သူတွေအတွက် လစဉ်အရစ်ကျ ငွေပေးချေရုံနဲ့ အရည်အသွေးကောင်း Laptop တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်မဲ့ Acer Active AEON Campaign လေးလာပါပြီ…
“Acer Active AEON Campaign” ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲ?
Acer Active AEON Campaign ဆိုတာက AEON Microfinance ရဲ့ လစဉ်ပေးချေမှုစနစ်နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်တဲ့ Acer Core i3, Core i5 , Core i7 Laptop ၀ယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ မော်ဒယ်အလိုက် cash back တွေအပြင် monthly promotion တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီး Double Chance ခံစားခွင့်ရမယ့် Promotion အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်..
Acer Active AEON Campaign မှာ
Acer Core i3 Series တွေအတွက် cash back 10 USD
Acer Core i5 Series တွေအတွက် cash back 15 USD
Acer Core i7 Series တွေအတွက် cash back 20 USD
Double Chance ဆိုတာက?
Double Chance ဆိုတာက Acer Active Aeon Campaign နဲ့ ၀ယ်သူတွေအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ မော်ဒယ်အလိုက် cash back အပြင် လစဉ် Promotion တွေက cash back များကိုပါထပ်မံခံစားခွင့်ရှိမယ့် အရမ်းအရမ်းတန်တဲ့ အခွင့်အရေးပါ..
ဥပမာ – Acer Aspire E5-476G(i7) 8th gen ကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် “ Acer Active AEON Campaign ( $20 cash back) နဲ့ Monthly Promotion က cash back ကိုတစ်ပြိုင်နက်ခံစားခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Aeon Microfinance ရတဲ့ IT & Mobile အရောင်းဆိုင်တွေအားလုံးမှာဒီ Acer Active AEON Campaign နဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..
စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ကနေ ၃၀ ရက်နေ့အထိပါ..
ကဲ..ဒီတော့ Laptop ၀ယ်ဖို့ပိုက်ဆံစုနေတဲ့သူတွေ ၊ ချက်ချင်းလက်ငင်းငွေချေပြီးဝယ်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေ ၊ငွေကိုလုံးကနဲ့ မသုံးချင်သူတွေအတွက် Acer Active AEON Campaign လေးကလုံးဝကိုလက်မလွှတ်သင့်တဲ့ အခွင့်အရေးကောင်းလေးပါပဲ..
ဒီလိုအခွင့်အရေးကောင်းလေးကိုကိုယ့်သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေလည်း လက်မလွှတ်လိုက်ရအောင် အသိပေးလိုက်ကြပါဦး..
Projector ဆို အရညျအသှေးကောငျးတဲ့ Acer မှ သုံးခငျြတဲ့...
စတိုငျကြ ဒီဇိုငျးမိုကျပွီး အရညျအသှေးကောငျးတဲ့ Branded Desktop တှေ...
ဘယျမှာမှ မရနိုငျတဲ့ တနျမှတနျ အထူးလြော့ဈေးတှနေဲ့ ” Year...
စတိုငျကြ ဒီဇိုငျးမိုကျပွီး အရညျအသှေးကောငျးတဲ့ Branded Desktop တဈလုံး...